Mayelana NATHI - Hebei Shipu Machinery Technology Co., Ltd.
I-Hebei Shipu Machinery Technology Co., Ltd.
I-Hebei Shipu Machinery Technology Co., Ltd. Ibhizinisi eliphelele elihlanganisa ukuklanywa, ukukhiqizwa, ukwesekwa kwezobuchwepheshe kanye nensizakalo yokuthengisa ngemuva, lizinikela ekuhlinzekeni insiza eyodwa yokumisa okokusebenza okuzenzakalelayo kwensiza kanye nokwenzela amakhasimende ubisi oluyimpuphu, ezemithi, imikhiqizo yokunakekelwa kwempilo, ama-condiment, ukudla kwezingane, imajarini, izimonyo, imboni yamakhemikhali nezinye izimboni. Khonamanjalo futhi ingahlinzeka ngemiklamo engajwayelekile kanye nemishini ngokuya ngezidingo zobuchwepheshe nokuhlelwa kwamasheya kwamakhasimende.
Eminyakeni ecishe ibe ngu-20 yomlando, inkampani isungule ubudlelwano bokusebenzisana namabhizinisi awaziwa emhlabeni wonke kule mboni, njenge-Unilever, i-P & G, i-Fonterra, i-Kerry nokunye, inikeze amakhasimende imishini esezingeni eliphakeme kanye nezinsizakalo zobuchwepheshe eziphelele futhi support, okunconywe kakhulu ngamakhasimende.
Ngaphansi kokuholwa yinqubomgomo kazwelonke ye- "One Belt And One Road", ukuze kuthuthukiswe ithonya lamazwe omhlaba leChina Intelligent Manufacturing, inkampani isuselwe ekwakhiweni nasekukhiqizweni kwemishini ephezulu yokupakisha, kanye nokubambisana nomkhiqizo odumile wamazwe omhlaba jikelele abahlinzeki, abanjengo: Schneider, ABB, Omron, Siemens, SEW, SMC, Mettler Toledo njll. Ngokususelwa esikhungweni sokukhiqiza eShanghai, sithuthukise amahhovisi ezifunda kanye nabenzeli e-Ethiopia, Angola, Mozambique, South Africa kanye nezinye izifunda zase-Afrika , engahlinzeka ngamakhasimende asendaweni ngamahora angama-24. Amahhovisi esifunda aseMpumalanga Ephakathi naseningizimu-mpumalanga ye-Asia nawo ayalungiswa.
Ukuphikelela "kumakhasimende acabanga ukuthi acabanga ngokuphuthuma kwamakhasimende" njengesimiso senkonzo, i-Hebeitech igxile ekunikezeni umeluleki wezobuchwepheshe ochwepheshe kumakhasimende, ukuze kube lula inqubo yokwakhiwa kwenqubo, ukukhethwa kwemishini, ukwakhiwa kweworkshop nezinye izixhumanisi eziningi amakhasimende, futhi uthuthukise ukusebenza kahle kwezimali.
Lapho usukhethe i-Hebeitech, khona-ke uzothola ukuzibophezela kwethu:
"YENZA UKUSETSHENZISWA KWEZIMALI KUKHONA KULULA!"